Soo dejisan Tixati 2.67 Standard iyo Portable – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Tixati
Tixati – macmiil awood leh in ay ka soo dejisan iyo wadaagaan faylasha la durduray. Software The kuu ogolaanayaa inaad reserved ee rarka iyo dajinta faylasha, nidaaminaya download ee mudnaanta, u aragto macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan faylka iwm Tixati awood u si ay u sameeyaan xiriir la isticmaalayo wakiil oo UPnP ama hab maamuuska UDP. Software The kuu ogolaanayaa inaad dhex gasho oo aad ka heli rating ka dejinta ee xaddi weyn oo warbixin torrent. Tixati gubtay, khayraadka nidaamka yar oo uu leeyahay si fudud aad ku isticmaasho interface.
Degsado iyo qaybsiga faylasha torrent
Aadka u customizable
Nidaamka rating ayaa
Soo dejisan Tixati
Faallo ku saabsan Tixati
Tixati Xirfadaha la xiriira
FrostWire – waa qalab lagu soo dejiyo laguna wadaago feylasha internetka. Software wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kala soo baxdo faylalka adeegyada caanka ah oo aad ku ciyaarto faylasha warbaahinta.